Dhalinyarada degmada Dhuusamareeb oo hogaan cusub doortay – Radio Muqdisho
Dhalinyarada degmada Dhuusamareeb oo hogaan cusub doortay
Munaasabad ay hogaan cusub ku dooranayeen dhallinyarada ku dhaqan degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay xarunta degmadaasi.
Kulan ay soo qaban qaabiyeen ururka dhalinyarada degmada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka qeyb galay Maamulka Degmada iyo qeybaha bulshada ee halkaasi ku dhaqan, kaasi oo u jeedkiisu ahaa dib u habeyn lagu sameeynayay ururka dhalinyarada Degmada.
Axmed Maxamed Maxamuud ayay dhalinyaradu si aqlibiyad leh ku doorteen in uu noqdo guddoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, waxaana hadal kooban oo uu goobta ka jeediyay balan qaaday in uu ugu adeegi doono si cadaalad ah, ayna kula shaqeeyaan sida kalsoonida leh ee ay ku doorteen.
Mid ka mid ah waxgaradka ka qeyb galay kulanka ayaa ku booriyay dhalinyarada inay u istaagaan horumarka degmada ilaa iyo kan heer gobol, isla markaana ay kulamo wacyigelineed u sameeyeen dhalinta kale ee aan nasiibka u helin inay xubin ka noqdaan ururka dhalinyarada degmada dhuusamareeb.
Guddoomiyaha degmada Dhuusamareen Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo-qorow ayaa sheegay in dhalinyarada loog fadhiyo inay ka qeyb qaataan horumarka iyo ka shaqeynta amniga degmada, waxaana uu intaa ku daray in doorka dhalinyarada ay meesha ka maqantahay oo ah la shaqeynta maamulka degmada iyo kan gobolka galguud si looga hortago waxkasta oo horumarka degmada hor istaagaya.
“Farxad ayay noo tahay in aan idinkala soo qeyb galno, kulankan aad ku doorateen hogaanka cusub, tan kale maamulka la’aantii ma shaqeyn karo, waxaana idinka rabnaa in aad ka soo dhalaashaan doorka idinkaga aadan horumarka gobolka” ayuu hadalkiisa ku daray Guddoomiyaha degmada Dhuusamareeb.
Shaqaalaha Wasaaradda Cadaaladda oo tababar loo soo xiray “SAWIRRO”